China FRP Bonai Corrugated Fiberglass Sheet Factory GRP Unoda fekitori uye vagadziri | Bonai
Washington City Offices nemakadhibhokisi pepa (Washington City Offices zvinhu epurasitiki Tile kana FRP skylight Corrugated denga remadziro) chinhu chinoshamisa chinoumbwa nezvinhu zvinosanganisira fiberglass inosimbisa mune isina kunyorwa polyester resin matrix uye U / V yakadzikamisa yekunze yekudzivirira kupfeka muvara resarudzo yako ine simba rakatanhamara uremu reshiyo.
Nekuda kwezvinhu izvi zvakasarudzika zvakasiyana nePV kana huni, inowana mashandisiro ayo zvakanyanya munzvimbo dzese dzehupenyu: muchadenga, njanji, indasitiri yemakemikari, indasitiri yegungwa, indasitiri yezvikafu, indasitiri yezvimotokari, kuvaka uye kuvaka, nezvimwe
Yakakwira transmittance inosvika 85% uye yakapfava masikati
Mukurumari: FRP machira ane hupenyu hwakareba hwakareba hwehupenyu sezvo iwo akasimba uye achichinjika
Kurema kwechiedza uye kwakasimba kwesimba kabhoni.
Yakanyanya Corrosion Resistant - FRP mapaneru akakodzerawo kushandiswa munzvimbo dzinokanganisa zvakanyanya uko kusvikirwa nemakemikari kana mvura yemunyu kunetsekana, iwo UV anopokana nezuva uye anogona kugadzirwa nevanodzora kubva pamoto pazvinenge zvichidikanwa.
Yakanaka Thermal Insulation: Iyo yekupisa conduction ye FRP ndeye 1.25 ~ 1.67 kJ / (m · h · K) pane tembiricha yemukati, chete 1/100 ~ 1/1000 yesimbi. Naizvozvo, inzvimbo yakanaka yekudzivirira yekupisa uye inopokana neablation mune inopfuura yekupedzisira-yakanyanya tembiricha mamiriro.
Kuchinja-chinja mukukura uye pakukora: FRP machira akagadzirwa machira uye anogona kugadzirwa muhukuru hwakasiyana, makobvu uye magadzirirwo.
Zviri nyore kuisa, kuchengetedza uye kuchenesa.
Tsika Ruvara uye Dhizaini: FRP machira anogona kugadzirwa mune chero ruvara uye akasiyana magadzirirwo.
1Pindura mibvunzo yako pamhepo maawa makumi maviri nemana panguva ipfupi inogoneka
Vashandi vane ruzivo kuti vapindure mibvunzo yenyu yese
4 Isu tinokuzivisa iwe nezve chaiwo masendimita uye mavara iwe aunoda.
5 Tinogona kuburitsa polycarbonate mabhodhi, uye isu takagadzirira kukupa iwe mamwe mazano kune rako ruzivo.
Pashure: FRP GRP Washington City Offices Plastic Drainage Channel
Zvadaro: Smooth Pamusoro Pultruded FRP Plastiki Flat Sheet